UMaxim Vladimirovich Dolgopolov uya kuqhuba i-trafficmo ye-Flashmob
UMbutho I nkcubeko
Imithetho yezithuthi kwiSt. Petersburg
UMhloli oPhezulu kwiNgxelo yoPhathiswa weNgaphakathi loMphathiswa weeMicimbi yangaphakathi yaseRussia uMaxim Dolgopolov uya kubamba iqela le-flash, elifanele liqwalasele ingxaki yokuthobela imithetho yeendlela.
Ekuqaleni kuka-Oktobha 2014 kwintsimi yeLenExpo iya kuba ngumcimbi omkhulu "SDA FLASHMOB" - isenzo esinobunzima kwimithetho yendlela. Kuya kubakho malunga namakhulu amathathu e-first-graders kwizikolo ezingaphezu kwe-100 eSt. Petersburg.
Abantwana bahlaziya ngenzondelelo. Ngexesha lokuphendula, iipolisa zamapolisa ziyakuchaza imigaqo yabahamba ngeenyawo kunye nabahamba ngeenqwelo zokuhamba, kunye nokuqhuba imincintiswano eyahlukeneyo kunye nemibuzo ukuze abantwana bangakhathali.
UDolgopolov Maxim: "Umsebenzi wethu kukukhusela abantwana ekufeni ezindleleni"
Ngexesha le-flashmob yabantwana kwiibhasiki kunye neemoto zokudlala ziza kudlala phambi kokuba abaphulaphuli babe nengcamango enkulu eya kubonisa indlela abadala, ngamanye amaxesha abanokholo olubi, bephula imithetho, baziphathe endleleni. Ngoko, ukudlala, abantwana baya kufunda imigaqo yendlela, bafunde imbeko kwaye bahlonipheke endleleni.
UMaxim Dolgopolov: "Injongo yale nkcazo enkulu kukuthabatha ingqalelo kwiinkokeli kubantwana. Inani leengozi zendlela ezibandakanya abantwana sele zikhula rhoqo ngonyaka. Kwiinyanga ezili-9 zango-2014 kukho iziganeko ezingama-526, ezingama-38 ngaphezulu kwexesha elifanayo le-2013. Kwi-70% yamatyala, abaqhubi banetyala yengozi, kodwa abantwana bahlala beziphatha ngendlela engalunganga endleleni, baqhutywe ngaphaya kwendlela kwindawo engafanelekanga okanye ekukhanyeni okubomvu. "
Umhloli ophezulu ucebise kwisikolo ngasinye, ngokukodwa kubalimi bokuqala, ukuyibeka nokubeka kwindawo efikelelekayo iskimu egqabileyo seendlela zokuhamba ezikhuselekileyo kunye nokufunda okokuqala kuyo yonke impawu yezothutho ezinxulumene nokhuseleko lwabahamba ngezinyawo: "Ukuhamba ngeendlela zokuhamba" kunye "neendlela zokuhamba ngeendlela" .
"Namathisela i-cataphyte yokuhamba ngezinyawo kwimpahla yengane yakho", - isiluleko somhloli ophezulu we-UGIBDD weSebe loMphathiswa wase-Russia, uMaxim Vladimirovich Dolgopolov
Ebumnyameni, kunzima ukuphawula kwaye kusabela ngokukhawuleza kwinto engalindelanga ukuyigxotha ekuhambeni komntwana. Ebusuku kwintonga ephosiweyo, indoda ephethe iimpahla ezimnyama ibonakala kuphela kumgama wama-25-30 amitha, kwaye le nto encinane kakhulu ukuba isabele ngokukhawuleza kwaye igweme ukudibana nomhambi. Ukuba kukho umfaki we-retroreflector, umqhubi uya kuphawula umntu kumamitha angama-300-350. "Ngoko ke, sincoma ukuba kulungiswe i-keychain ekukhanyeni kwengubo yomntwana okanye i-knapsack," kuchaza uMaxim Vladimirovich Dolgopolov. Ngendlela, kumazwe amaninzi asekumntla, apho ebusika kuya kufutshane kakhulu, njengaseRussia, amanyathelo anjalo anqunywe emthethweni.
Sibonisa ukubonga kwethu ngoncedo ekuqulunqeni izixhobo:
UMhloli oPhezulu wePropaganda yoMphathiswa weNgaphakathi loMphathiswa weeMicimbi yangaphakathi yaseRussia i-Dolgopolov Maxim Vladimirovich
Umhloli wePropaganda yoLawulo loMphathiswa weMicimbi yangaphakathi yoMphathiswa weMicimbi yangaphakathi yaseRussia eya kuLevanev Nikolay Petrovich
Umhloli we-Junior we-UGIBDD Ipropaganda Isebe loMphathiswa we-Interior waseRussia Ulyanova Svetlana Sergeevna
Amabali amaKrismesi amahle kakhulu: yintoni enokuyifundela intombazana?
Iparele yenkcubeko yaseYurophu - eHungary
Iziganeko zokuqala zoNyaka woNyaka omtsha
Umntu waseRussia angahlala njani ngaphandle?
Abafazi baseRussia bahlala njani e-Iran?
Iipulo ziyabhaka ngamanqwanqwa kunye nobisi olunqanyuliweyo
Indlela yokuchonga ngesondo somntwana kwangaphambili?
I-Galette ne-zucchini kunye ne-ricotta
Ukunyamekelwa kweenwele kuhamba ne Kerastase
Intsapho yam ikholwa, indlela yokuziphatha nayo?
Indlela yokufundisa umntwana ukuba adle ngokuzimela
Yintoni oqhagamshelana naye?
I-Horoscope ngoJanuwari 2018 - Umfazi waseCapricorn - ukusuka eTamara Globa no-Angela Pearl
Isaladi kwi-anyanisi eluhlaza
I-Samba - i-temperament kunye nomdla weBrazil kumdaniso omnye
Kutheni kubalulekile ukuba i-massage yesibeleko?